ဗန်းတဲ့ - ဝီကီပီးဒီးယား
View of Vangteh
ဗန်းတဲ့ Vangte  သို့မဟုတ် Vangteh သည် မြန်မာနိုင်ငံ, ချင်းပြည်နယ်, ဖလမ်းခရိုင် ရှိ တီးတိန်မြို့နယ် တောင်ပိုင်း ဒေသအတွက် ရွာကြီးတရွာဖြစ်ပါသည်။ Vangte ဟုလည်းမှတ်တမ်းဝင်သည်။ 
၂.၄ Khumnuai-Vangteh မှ shift
ဗြိတိသျှတို့၏မှတ်တမ်းတွင် ဗမာအသံကိုလိုက်၍ ဗန်ကတဲ့ Wunkathe ဟူ၍လည်းကောင်း၊ တခြားခေတ်ပြိုင်မှတ်တမ်းတချို့တွင် Vangte ဟူ၍လည်းကောင်း မှတ်တမ်းတင်ထားပါသည်။
ဗန်းတဲ့သည် ဒေသအဆိုအတိုင်း ရွာကြီးတခုဖြစ်ပါသည်။ မှန်ပါသည်၊ ပင်လယ်ပြင်အထက် အမြင့်မီတာ ၁၅၀၀ နှင့် ၂၇၀၀ ကြားရှိ ချင်းတောင်ထွတ်များ အကြားတည်ရှိသော ဤတောင်ပေါ်ရွာသည် သူ့ခေတ်သူ့ခါတွင် ဘုန်းတန်ခိုးအလွန်ကြီးခဲ့ဖူးလေသည်။ရဗှး
ရှေးကဗျာသီချင်းများတွင် ရွာထိပ်တောင်ထွက် ဖြစ်သည့် ခူမ်းKhumh တောင်ထွတ်ကို အမှတ်ပြုလျက် ခူမ်းနွဲ Khumnuai ဟု ညွှန်းလေ့ရှိပြီး၊ "ခူမ်းတောင်ထွက်၏ အရိပ်ကို ခိုသည်" ဟု အဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်လေသည်။ ဥပမာ၊ ဒေသခံလူကြီးတဦးဖြစ်သူ ဦး N. L. Zam က ရွာတည်အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် ခူမ်နွဲဟုပင် ကဗျာသီချင်းကို အောက်ပါအတိုင်း စပ်ဆိုခဲ့သည်။
Tuan aa pupa '' siahtaang kaihna, Khumhnuai ka Vang khua ee hi;
Zingvai hawmpih hanzai sakpih pawl le gual ih Kim nam aw [N. L. Zam, နွေဦး 1994] ။
ခူမ်နွဲသည် ငါ၏ချက်ကြွေရာအရပ်ပါပေ။ ဘိုးဘေးအစဉ်ဆက် အပိုင်စားရာပြည်ပါလေ။
အေးအတူပူအမျှသော ရဲဘော်ရဲဘက်တို့လေ စုံနေကြတုန်းပဲလော။
ဗန်းတဲ့သည် တချိန်တခါများတွင် အစဉ်အလာကြီးခဲ့သော ဂွီးသဲ (သို့မဟုတ် Nwite, Vuite, Nguite [Vangteh အတွက်ဒေသခံအသံထွက်] Gwete, Gwite) မျိုးနွယ်စုတို့၏ နိုင်ငံရေး၊ စစ်ရေးဌါနကြီးတခုဖြစ်ခဲ့ဖူးလေသည် (အေဒီ 1300-1900)။
အခြားသောမျိုးနွယ်စုများသည်လည်း ဆိုင်ရာဒေသများတွင် ၎င်းတို့၏အပိုင်းစားမှုရှိခဲ့သော်လည်း ဂွီးသဲတို့၏ အချူပ်အခြာပိုင်ဆိုင်မှုအောက်ရှိ ဩဇာခံများသာဖြစ်ကြသည်။ ၎င်း ဂွီးသဲတို့၏ အချူပ်အခြာပိုင်ဆိုင်မှုသည် တောင်ပိုင်းဒေသဖက်မှ Pawi တို့၏ စုပေါင်း ထိုးစစ်ဆင်နွှဲမှုများ စိမ့်ဝင်လာသည့် ၁၉ ရာစုလယ်ပိုင်းကာလ ထိတိုင်တိုင် နှစ်ပေါင်းရာစု ၆ ခုမျှတည်တံ့ခဲ့သည့်။ ထို့ကြောင့် ဦးစိန်ခိုခိုင်ရေးသားသောစာအုပ်၌ Pawi တို့၏အစောင့်အရှောက်ခံ Sukte မိသားစုတစ်စု၏ နှောင်းပိုင်းဩဇာအာဏာကြီးထွားလာပုံကို ဒေသစကား "To" ဟူ၍လည်းကောင်း၊ ဂွီးသဲတို့၏ ရှိရင်းစွဲဘုန်းတန်ခိုးကို "Mang" ၍လည်းကောင်း နှိုပြ၊ သုံးနှုန်းလေသည်။ သူ၏အနက်ဖွင့်ဆိုပုံအရ "Mang" သည် ရှိရင်းစွဲ ဩဇာညောင်းမှုသဘောသက်ရောက်ပြီး၊ "To" သည် တဖက်သတ်အနိုင်ယူမှုကြောင့် ဩဇာသက်ရောက်မှုသဘော သက်ရောက်လေသည်။
အထူးသဖြင့် ဗန်းသဲ့ Vangteh သည် ယနေ့မျက်မှောက်အခေါ် ချင်းပြည်နယ် မြောက်ပိုင်းနေ မိမိကိုယ်ကို ဇိုမီးဟုခေါ်သော ဒေသခံတိုင်းရင်းသားများ၏ နောက်ကြောင်းရာဇဝင်ကို အသေးစိပ်လေ့လာလိုသည့် သမိုင်းသုတေသီများအတွက် အသင့်လျော်ဆုံးသော သမိုင်းအဝင်ဆုံးနေရာပင်ဖြစ်သည်ဟုဆိုလျှင် ပိုမည်မထင်ပါ။
ရှေးကာလ၏ကျန်ရစ်သူအကြွင်းအကျန်အဖြစ် လူမျိုးစုဘာသာတရား အတွက် Over-ရေကြီးမှုအလယ်၌မိမိတို့၏ရှေးဟောင်းထုံးတမ်းစောင့်ရှောက် ခရစ်ယာန်ဘာသာ ပြည်, ပါးစပ်အစဉ်အလာ ( ပါးစပ်အစဉ်အလာ ထိုကဲ့သို့သောမြင့်မြတ်ကဲ့သို့) တန်ဂါထာ, ရိုးရာစစ်သီချင်း ပျိုးခင်းကဗျာကို နှင့်အခြား ရိုးရာသီချင်း နေဆဲ Vangteh အတွက် 100 နီးပါးအိမ်ထောင်စုအားဖြင့်အသုံးပြုမှုအတွက်ဤပစ္စုပ္ပန်အချိန်အထိပါပဲ။ ဒီစာရေးသူက 2000 ခုနှစ်မှာ Vangteh မှသူ့ရဲ့နောက်ဆုံးခရီးစဉ်အတွင်းခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ကြောင်းစာရင်းအရနေဆဲအလားတူ ( "ဘိုးဘွားဝိညာဉ်များ" ၏ကိုးကှယျခွငျးအဓိပ်ပာယျ, သူတို့က "ပူး-sa" မခေါ်ကြောင်း၎င်းတို့၏ရှေးဟောင်းဘာသာတရားကျင့်သုံးကြသူတွေအကြောင်းတရာအိမ်ထောင်စုနေဆဲရှိပါတယ် ရန် ဘိုးဘေးကိုးကွယ်မှု ) ။ 2002 ခုနှစ်တွင်သူတို့၏မြင့်မြတ်သောတန်ဂါထာအချို့ကိုကန့်သတ်မိတ္တူ print ထုတ်မှအရာရှိတဦးကခွင့်ပြုချက်နေဆဲ Vangteh ၌ဤရှေးကာလဘာသာတရားလေ့ကျင့်သောသူတို့အဘို့သူတို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှု၏စောင့်ရှောက်အတွက်မြန်မာအစိုးရကခွင့်ပြုပေးခဲ့သည်။ 
ခံတွင်းအစဉ်အလာအရ, Vangteh ၏တည်ထောင်ခြင်းယင်း Vahuis (၏ Pre-ပျစခနျးမှ related ခဲ့သည် Vahui ), Ngaihtes ( Ngaihte ), နှင့် Neihgups ( Neih Khup သို့မဟုတ် Neih Gup ပစ္စုပ္ပန်၏ပရိဝုဏ်၌တည်သော Tawizawi လို့ခေါ်တဲ့အရပ်မှာ) ကနေသစ်တစ်ခုအခြေချရှာဖွေတာအတွက် Vangteh -day Ciimnuai (Chinwe), ဒေသတွင်း၌သူတို့ရဲ့ပထမဦးဆုံးအခြေချရာအရပ်။  ဒီနေရာအသစ်ထိုသူတို့အဘို့အဆင်ပြေသလိုပဲအဖြစ်သူတို့ပြန်ဆီသို့ရောက် လာ., Ciimnuai သူတို့ရဲ့သစ်ကိုအခြေချဘို့ခွင့်ပြုချက်ရရန်။ ယင်းအစဉ်အလာအရ, မည်သည့်သစ်ကိုအခြေချအတွက်ဝိညာဉ်ရေးရာနှင့်နိုင်ငံရေးကာကွယ်မှုကိုရရှိနိုင်ဖို့အတွက်အာဏာရအိမ်၏ရိုးရာဓလေ့ခွင့်ပြုချက်လိုအပ်သည်။
ဒီအစဉ်အလာနှစ်ဦးကိုရည်ရွယ်ချက်မှဝိညာဉ်ရေးရာ (ဘာသာရေး) ကာကွယ်မှုကိုရရှိနှင့်ဤရှေးကဩောလူ့အဖွဲ့အစည်းဤမျှလောက်ဘာသာရေးအယူသည်းလေ့အကျင့်များဖို့ခညျြနှောငျကြောင့်အိမ်သူအိမ်သား-The ပြီးတော့အာဏာရများ၏မျက်နှာဖုံးအောက်မှာနိုင်ငံရေးမတရားဝင်မှု (သို့မဟုတ်တောင်မှစစ်ရေးမဟာမိတ်) ဆိုကြသည်များအတွက်တီထွင်မျှသံသယဖြစ်ခဲ့သည်။ တောင်မှနှောင်းပိုင်းကိုးရာစုတိုင်အောင်, ကဘာသာရေးရှုထောင့်အနည်းငယ်သောအခြိနျကာလအားဖြင့်ဆုံးရှုံးခဲ့ရသော်လည်းဒီအစဉ်အလာ unbrokenly ဒေသတွင်း၌ကျင့်သုံးခဲ့ကွောငျးထငျရှားပါသညျ။ ဥပမာ, နောက်ပိုင်းတွင်ပေါ်ထွက်လာ Sukte မိသားစုက Kaptel များ၏ရွာတည်ထောင်ခြင်း၏သမိုင်းအတွက်, အခွင့်အာဏာနိုင်ငံရေးတရားဝင်မှုနှင့်စစ်ရေးမဟာမိတ်တောင်းဆိုဖို့ပစ္စုပ္ပန်ဖလမ်း၏ Tlaisun မိသားစုကနေဆင်းသက်လာခဲ့သည်။ 
သူတို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်ကိုပြန်ကြားချက်မှာတော့ Mang Suum မဟာ၏မင်းသား Ciimnuai, သင့်လျော်သောနေအိမ်သို့ကိုသူ့အဘို့အဆင်သင့်ရှိသောအခါနောက်တစ်နှစ်အားဖြင့်, သူ့ညီတ Kul ဗိုလ်ချုပ်ကြီးပို့ပေးရန်ကတိပြုခဲ့သည်။ လက်ရှိရိုးရာသီချင်းတွေကိုတစ်ဦး၏အဆိုအရ, ဤအမှုအခြားဇာတ်လမ်းဖြစ်ပါတယ်။ သီချင်းသုံးမှူးမတ်, နှောင်းပိုင်း GUI Mang မဟာ၏သားတွင်ထင်ဟပ်အဖြစ်  တလက်ပေါ် Tawizawi လူမျိုး (Vahui, Ngaihte, Neihgup) အဖြစ်အုပ်ချုပ်ရေးဒေသများအောင်ဖို့ဘယ်လိုအကြောင်းဆွေးနွေးမှုအောင်နှင့်မာလကာလူမျိုး (ခဲ့ကြသည် Gangte, ငါးစာ, Valte အခြားအပေါ်) တစ်ချိန်တည်းမှာခေါင်းဆောင်မှုနဲ့အသစ်အခြေချဘို့တောင်းဆိုနေတာခဲ့ကြသည်။  ဒီကိစ္စကိုဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဗေဒင်တွက်ခြင်းငှါအဘို့အဘာသာရေးဘာသာရေးထုံးတမ်းအောင်နေစဉ်, ထူးဆန်းတဲ့ငှက်သူတို့အပေါ်မှာလှုပ်ရှားမြင်ထပ်တလဲလဲတစ်ဦးကဗြာဆနျသီခငျြးကိုသီဆိုခဲ့ခဲ့သည်, ထို says:
Tuilu aa pai, ni le Kha Siam; tuitaw aa pai simzawng vontawi dawnto peeng mawh
သူသည်မိမိအသိရောက်လာသောအခါသို့သော်အငယ်ဆုံးမင်းသား, Naksau [Kullia], အ ecstatic စကားပြန်ဖြစ်ခြင်း, အထက်နှင့်အောက်မရောထွေး။ ထို့ကြောင့်နောက်ဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်အညီအငယ်ဆုံးမင်းသားအဖြစ်ဖန်ဆင်းခဲ့ Naksau, နှိမ့်ချတကယ်တော့, မာလကာ, အထက်ဒေသအထိသွားပေမယ့်မင်္ဂလာရှိစေခြင်းငှါအားဖြင့်လျော့နည်းအားသာချက်ဖြစ်စေပါတယ်မှ ရွေးချယ်., ထို့နောက် Kul ဗိုလ်ချုပ်ကြီးသည် Tawizawi မှဒုတိယမင်းသား, အောက်ပိုင်းဒေသ, ဒါပေမယ့်ကိုယ့်အတွက်လုံလောက်သောထက်မပိုဖြစ်; နှင့်, Mang ဆမ်းအတွက်ဆက်လက်တည်ရှိစေခြင်းငှါ, ကြီး Ciimnuai, သူတို့ရဲ့ဘိုးဘွားအိမ်မှာ။  လာမယ့်နွေရာသီကသူ၏ဆိုက်ရောက်တွင်, Kul ဗိုလ်ချုပ် ", ဘုန်းကြီးသောရွက်ပေါက်သို့မဟုတ်ပေါက်" အဓိပ္ပာယ် "Vangteh ၏အိမ်တော်" သူ၏နေအိမ်သို့အမည်ရှိနာမကိုအမှီ Vangteh အောက်ပါဆယ်စုနှစ်များစွာအတွင်းလူကြိုက်များဖြစ်လာသောကနေ။
Tawizawi မှာဒီအစောပိုင်းကပျစခနျးယဇ်ပုရောဟိတ်သို့မဟုတ်မိသားစု-ခေါင်းကိုသူတွေကိုမြင်ကြကြောင်းမည်သည့်ထိခိုက်မှုဆန့်ကျင်သောနေရာများသို့မဟုတ်မွငျရန်သူများမှငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်သာယာဝ၏အရေးဆိုမှုအတွက်အတော်ကြာသောနေရာများနှင့်တိုင်းဒေသကြီးများ၏အမည်များကိုရွတ်ဆိုသင့်သောထဲတွင်သန့်ရှင်းသောဘာသာရေးထုံးတမ်းတဦးလည်းထင်ရှားစေခြင်းငှါ, ဖြစ်ပါတယ် ဆောင်ခဲ့ရမည်။ ဒါဟာရိုးထုံးတမ်းစဉ် "khuasuum sim" ဟုခေါ်သည်။ အဆိုပါရွတ်ဆိုထားသောမှာတော့ Tawizawi Vangteh ပြီးနောက်ပထမဦးဆုံးညာဘက်လာပါတယ်။ တကယ်တော့ဒီအသက်ကြီးမှု, အခြားလက်ပေါ်, Vangteh ၏သမိုင်း၏အစအဦးမှာ Tawizawi ၏ပြံ့နှံ့တည်ရှိဖော်ပြသည်။ 
အဆိုပါရိုးထုံးတမ်းစဉ်အပေါ်နည်းနည်းပိုပြီးအလေးပေးရန်, "khua-suum sim" [suum] က khua [Vangteh ဖို့သွယ်ဝိုက်ရည်ညွှန်း] ၏တနျခိုးသူတို့အားသောနေရာများနှင့်တိုင်းဒေသကြီးများ၏အမည်များအဖြစ်ရောက်ရှိခဲ့ကြောင်းဘယ်လောက်ဝေးအဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်သည်နှစ်စဉ်ရွတ်ဆိုနေကြသည်။ အဆိုပါရိုးထုံးတမ်းစဉ်ပထမဦးဆုံးနီးပါးတစ်ဝက်တစ်ထောင်စုနှစ်လွန်ခဲ့တဲ့တီထွင်အခါတကယ်တော့တလက်ပေါ်, ကရှင်းပါတယ်ဘယ်လောက်သူတို့အားနေရာ Vangteh ၏ religio နိုင်ငံရေးအခန်းကဏ္ဍ, ထိုနေ့ရက်ကာလ၌အလွန်အရေးပါခဲ့သည်။
ထို့ပြင်အဆိုပါ Tawizawi ၌ဤသစ်ကိုအခြေချနိုင်ငံသားများမှနေရာအသစ်ရှာတွေ့ထက်ပိုရည်ရွယ်ပါသည်။ ဒါဟာအမှန်တကယ်မိမိတို့၏သရဖူဆောင်းမင်းသား, Kul ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများ၏ခေါင်းဆောင်မှုအောက်မှာသစ်တစ်ခုသမိုင်းအောင်ခဲ့သည် အလွန်သိသာသလိုပဲလုံးဝချန်လှပ်ခံခဲ့ရသည်နှင့်စိတ်ဖိစီးမှုသိသိသာသာ Kul ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနှင့်ဗိုလ်ချုပ်ဒေါင်, မင်းသား Kul ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများ၏သားအပေါ်ပေးထားခဲ့သည် မှလွဲ. ဤအယူအဆရှင်းရှင်းလင်းလင်း, ထို Vangteh Guite မိသားစုတစ်စု၏တိုတောင်းဆှစေဉျမြိုးဆကျစာရင်းယခင်ဘိုးဘေးများ၏ရသောအများအပြားအမည်များအတွက်သက်သေဖြစ်ပါတယ် အခုအသစ်အခြေချတှငျမှေးဖှား။ ဥပမာ, Vangteh Guite အစဉ်အလာများပိုမိုတိုတောင်းစာရင်းကိုအောက်ပါအဖြစ်ဘတ်စေနိုင်သည်
Guite နီ GUI, နီ GUI GUI ဗိုလ်ချုပ်, GUI ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဘွား GUI Mang, GUI Mang သားသုံးယောက် (Mang Suum, Kul ဗိုလ်ချုပ်နှင့် nak sau [Kul လိုင်]) ဘွားဘွားဘွား။ 
သို့သော်ကြာကြာစာရင်းထဲတွင်ထက်ပိုတစ်ဆယ်ဘိုးဘွားအမည်များ Guite မဟာနှင့် GUI Mang မဟာအကြားသို့ ဝင်. ခဲ့ကြသည်ပင်ရှိပါသည်။ ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းဤသည်မှ Vangteh ၏လွတ်လပ်သော status ကိုတစ်ခုသက်သေအထောက်အထားဖြစ်ပါတယ် Ciimnuai အာဏာရမိသားစုစဉ်ဆက်မပြတ် သာ. Guite မင်းဆက်မှ၎င်းတို့၏တရားဝင်မှုနှင့်ဆှဖှေဲ့ညွှန်ပြရန် Guite နာမတော်ကိုအမှီ ပြု. ထိန်းသိမ်းထားသော်လည်း။
Vangteh ၏ဤလွတ်လပ်သောပြည်နယ်တစ်ပျိုးခင်းကဗျာကိုကလေးထိန်းကသီဆိုခဲ့သည်အတိုင်းဤနှစ်ခုဒဏ္ဍာရီညီအစ်ကိုတို့, Mang Suum နှင့် Kul ဗိုလ်ချုပ်ကြီးကြားတော်ဝင်ညာဘက်၏ဌာနခွဲအမြဲအောက်မေ့ရခဲ့သည့်အတွက်ပါးစပ်အစဉ်အလာအတွက်ထင်ရှားထက်ပိုပါတယ်။ အဆိုပါကဗျာကိုရိုးရှင်းစွာ says:
ka nau aw ee, ဗိုလ်ချုပ်ဒေါင် aw, Ciimnuai dongah ဗိုလ်ချုပ်ဒေါင် aw [အမ် Suum ငါက c ။ 1400] ။ 
ဗိုလ်ချုပ်ဒေါင်အမည်ရှိငါ့ချစ်ကလေး, ဗိုလ်ချုပ်ကြီး (Kul ဗိုလ်ချုပ်ကြီးရန်ရည်ညွှန်း) မိမိလေးစားမှုဖေါ်ပြခြင်းအတွက်ဝေး Ciimnuai ဖို့ကျွန်မကိုမေးလျှောက်ကြလျှင်မူကြောင်းကို, (ဗိုလ်ချုပ်အဓိပ်ပာယျတောငျးဆိုသို့မဟုတ်ဤဆုံးမစကားကိုယူပြီးဖြစ်ပါသည်) ။ ။ ။
ဤသည်မှာကဗျာကိုသီချင်းနောက်ကွယ်မှဖြစ်ပျက်ခဲ့သောအရာကိုထင်ဟပ်။ မင်းသား Kul ဗိုလ်ချုပ်ကြီးကသူ၏နေရာအသစ်အတွက်သူ၏ပထမဆုံးဖွားသားကိုမြင်လျှင်ဤသူသည်ကဗျာနှင့်ပတ်သက်သောပါးစပ်အစဉ်အလာအရ, သည်, မိမိလေးစားမှုဖေါ်ပြခြင်းအတွက်သူမှ Langgsum ဟုခေါ်တွင်သည်သူ၏လက်နက်ဆောင်လုလင်ကိုစေလွှတ် Ciimnuai ကလေးရဲ့နာမည်အသစ်နှင့်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတောင်းခံရန်။ ဒီညီအစ်ကိုချစ်ခြင်းနှင့်ရိုသေလေးစားမှုနှင့်အတူကိုအလွန်ကျေနပ်ဖြစ်ခြင်း, မင်းသား Mang Suum တစ်ဦးဆုတောင်းပဌနာအော်ဟစ်ခဲ့ကြကြောင်းသိရသည်နာမည်ပေးခြင်း၏အခါသမယမှာသီဆိုနှင့်သူ၏ကလေးများအတွက် Billy ဆိတ်လက်ဆောင်တစ်ခုနှင့်အတူပြန် Tawizawi-Vangteh ဖို့လက်နက်ဆောင်လုလင်ကိုစေလွှတ်ခံရဖို့ဒီပျိုးခင်းကဗျာကိုရေးစပ် တူ။ ယင်းကိုဖြတ်ကူးနေစဉ်သို့သော်ကံမကောင်း, အောက်ပိုင်းတံတားမှတဆင့်သူ၏လမ်း-အိမ်ပြန်ပေါ်တင်းတင်းကျပ်ကျပ်ကသူ့လက်ကောက်ဝတ်မှာ Billy ဆိတ်သငယ်ကိုချည်ဆင်းရဲသားကို Langgsum, တံတားမှပယ်ကျဆင်း Sialtang ချောင်းကပြောသည်ခံခဲ့ရသကဲ့သို့ညံ့ဖျင်းမိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းမှုအောကျတှငျမဆိုကယျတငျခွငျးမရှိဘဲသေဆုံးသွားခဲ့သည် ပြိုလဲနေစဉ်အတွင်းဖြစ်။
ထို့ကြောင့်, Langgsum လမ်းကိုအပေါ်ရန်သူများကိုသို့မဟုတ်သားရဲတကောင်အားဖြင့်ပြန်ပေးဆွဲသို့မဟုတ်အသတ်ခံခဲ့ယူဆထားကြောင်း, Kul ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတစ်ဦးကောင်စီခေါ်သွားရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည် Ciimnuai အခြေအနေကိုစုံစမ်းမှု၌တည်၏။ ထို့ကြောင့်, မင်းသား Mang Suum ထံသို့လာရန်လိုအပ်ကြောင်းရှိမဟုတ်ကြောင်းဒါကြောင့်သူ့ညီကသူ့အခွင့်အာဏာလွှဲအပ်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည် Ciimnuai နောက်တဖန်နှင့် Vangteh လူတွေကသူတို့ကိုယ်သူတို့ခြင်းဖြင့်သူတို့၏ကိုယ်ပိုင်အနာဂတ်ဆုံးဖြတ်သင့်ကြောင်း။ ဤဇတ်လမ်း Vangteh အတွက်သားစဉ်မြေးဆက်တလျှောက်လုံး "Hausa tuul khenna" အဖြစ်ကြားပြောလေ၏။ အောက်ပါမင်းသား Mang Suum နှင့်မင်းသား Kul ဗိုလ်ချုပ်ကြီးကပြောပါတယ်ခဲ့ကြသည်သောဤအဖြစ်အပျက်၏ commeorative သီချင်းဖြစ်ပါသည်, prearrangement မပါဘဲ, ထိုအစဉ်အလာတျသှငျးခံပရောဖကျမိနျ့တစ်ဦးကြင်ကြင်နာနာအဖြစ်ယုံကြည်ကောက်ကာငင်ကာသီဆိုခဲ့။
Ciim leh Tawi တူးအီနေတဲ့ ih maankhawm အတွက် Ning leh ai-sa အတွက် kizawituah Ang;
ki-el lo-in ကို, Phung GUI ni nuai-ah kibawmtuah Ang [အမ်အတွက် tuu ပေါက်ကွဲသံကြီး suanh Dang Suum ငါ & K. ဗိုလ်ချုပ်, က c ။ 1400] ။ 
နေသမျှကာလပတ်လုံး Ciim (Ciimnuai အတိုကောက်ပုံစံ) နှင့် Tawi လူ (Tawizawi အတိုကောက်ပုံစံ) ၏လူဦးစိုးစံသို့မဟုတ်အကြံထမြောက်ရသောအ, ငါတို့မိတ်သဟာယဖွဲ့ပွဲသို့, စပျစ်ရည်နှင့်အသားတစ်ဦးပွဲသို့ထိန်းသိမ်းရန်ပါစေသကဲ့သို့,
ကျွန်တော်တို့ရဲ့သားစဉ်မြေးဆက်အသီးအသီးကိုအခြားဆန့်ကျင်သွားရပေမယ့်ကျွန်တော်တို့ကိုနေရောင်ခြည် GUI မိသားစု၏နာမတော်အောက်တွင်အတူတကွပူးပေါင်းမသွားပါစေကြကုန်အံ့။
"tuul khenna" ၏ဤသတင်းနှင့်အတူမင်းသား Kul ဗိုလ်ချုပ်နှင့်သူ၏ကောင်စီ Bizaang လဲ့ကိုခေါ်အောက်ပိုင်းတံတားမှတဆင့်ပြန် Tawizawi မှ လာ., ထိုအရပ်၌သူတို့တံတား၏အခြားဘက်ခြမ်းနှင့် Billy ဆိတ်သငယ်အပေါ်ဆွဲထား, ဆင်းရဲသော Langgsum ၏ကိုယ်ကိုတွေ့ရှိရ အခြားပေါ်မှာ။ ဒါကြောင့်ဤပစ္စုပ္ပန်အချိန်ကာလမရောက်မှီတိုင်အောင် Vangteh အတွက်အောက်ပါအတိုင်းသီဆိုခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီဖြစ်ရပ်မှတ်မိဖို့, Kul ဗိုလ်ချုပ်ကြီးကဗျာရန်နောက်ထပ်ဝါကျကဆက်ပြောသည်:
ka nau aw ee, ဗိုလ်ချုပ်ဒေါင် aw, Ciimnuai dongah ဗိုလ်ချုပ်ဒေါင် aw; si aw ee အတွက် Keeltal kai [ed ။, K. ဗိုလ်ချုပ်, cf. 1400]
ဗိုလ်ချုပ်ကြီး (Kul ဗိုလ်ချုပ်ကြီးရန်ရည်ညွှန်း) မိမိလေးစားမှုဖေါ်ပြခြင်းအတွက်ဝေး Ciimnuai ဖို့ကျွန်မကိုမေးလျှောက်ကြလျှင်မူကြောင်းကိုဗိုလ်ချုပ်ဒေါင်အမည်ရှိငါ့ချစ်ကလေး, ဒါပေမယ့်သူကညံ့ဖျင်းသည့် Billy ဆိတ်သငယ်ကိုအိမ်ကယူဆောင်လာရန်ကြိုးပမ်းမှုသေဆုံး
Khumnuai-Vangteh မှ shift[ပြင်ဆင်ရန်]
လူဦးရေကြီးထွားလာအဖြစ်သို့သော်လည်း, အာကာသ Tawizawi မှာသူတို့ကိုထားရှိရန်မလုံလောကျသလိုပဲခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်, ဗိုလ်ချုပ်ဒေါင်, Tawizawi ၏ထို့နောက်သရဖူဆောင်းမင်းသား၏အချိန်အားဖြင့်, အခြားသောအရပ်မှအသစ်တခုပြောင်းကုန်ပြီအရေးပေါ်လိုအပ်ချက်ဖြစ်လာသည်။ ပိုကောင်းတဲ့မြေဩဇာမြေယာအကြာတွင် Thuam Tung Neihgup, ထိုကောင်စီအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးတွေ့သောအခါမပေးမကြာမီပြီးနောက်, အမဲလိုက်ရန်သူ၏လမ်းအပေါ်တစ်ဦးအနိမ့်ပြည်, အသစ်တစ်ခုကိုပြောင်းရွှေ့အညီဗိုလ်ချုပ်ဒေါင်ကစီစဉ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။  အရပျကိုသူ့ဟာသူလည်းနာမည်အသစ် Vangteh အတူစွန့်ပစ်ခံခဲ့ရအဖြစ် ထိုအချိန်မှစ. ဟောင်းနာမကိုအမှီ Tawizawi အစားထိုးခဲ့သည်။
အခုအသစ်ပြောင်းကုန်ပြီအတည်ပြုနိုင်ဖို့အတွက်ဓမ္မတန်ဂါထာကြောင်းအစဉ်အလာ "khuavang-paih" အခုအသစ်အခြေချရှာတွေ့မှာစည်းဝေးသောသူအသီးအသီးတို့မိသားစု-အုပ်စုများမှကိုယ်စားလှယ်များ၏အမည်များကိုနှစ်စဉ်ရွတ်ဆိုခဲ့ကြသည်ရသောအဖြစ်လူသိများခဲ့သည်, မင်းသားဗိုလ်ချုပ်ဒေါင်အသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးခဲ့ပါတယ် နှင့်အကြား၏, လေးအမည်များကိုအထူးလေးနက်စွာကပြောပါတယ်သောရွတ်ဆိုထားသောအတွက်အလေးပေးခဲ့ကြသည်
Phung '' khua, Zui Kim က '၌ tai na khua ... (ဦးဇို Thuam ၏, Thah Phung ၏, နှင့် Zui ကင်မ်၏အဓိပ္ပာယ်ကို, Mun အ Ting ၏ဇာတိအရပ်ဖြစ်ဆိုလိုသည်မှာ "Mun အ Ting' 'khua, ဇို Thuam' 'khua, မင်္ဂလာရှိသော။ ။ ။ ) "
အစဉ်အလာအရ, Mun အ Ting, မင်းသားဗိုလ်ချုပ်ဒေါင်၏မြေးဖြစ်သူ, ပထမဦးဆုံးအဖြစ် Guite မိသားစုတစ်စု၏ကိုယ်စားလှယ်၏, ဇို Thuam, Thuam Tung ၏အဘိုး, ဒုတိယအဖြစ် Neih Gup မိသားစုတစ်စု၏ကိုယ်စားလှယ်၏, Thah Phung, အ unrecorded နာမတျော၏သား, တတိယအဖြစ် Vahui မိသားစုတစ်စု၏ကိုယ်စားလှယ်၏, နှင့် Zui ကင် Awh စိုင်းနော်ခမ်း၏သား, စတုတ္ထအဖြစ် Ngaihte မိသားစုတစ်စု၏ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်ပါတယ်။ 
ဤသည်အမည်များ-ရွတ်ဆိုထားသောနှစ်စဉ်ဤပစ္စုပ္ပန်နေ့တိုင်အောင်တစ်ရိုးထုံးတမ်းစဉ်အဖြစ်သူတို့၏မြင့်မြတ်တဲ့ဘာသာရေးဖျော်ဖြေပွဲအတွက်ယဇ်ပုရောဟိတ်များနှင့်တစ်ဦးချင်းစီမိသားစုအုပ်စုများ၏ဦးခေါင်းကနေ incanted ခဲ့သည်။  Vangteh အတွက်ကြီးမားတဲ့ဖြစ်ရပ်များသို့မဟုတ်ပွဲတော်များလည်းမရှိအခါတိုင်းဒီအထွတ်အမြတ်ရိုးထုံးတမ်းစဉ်၏အလငျး၌, Vangteh ၏တည်ထောင်သူအဖြစ်မင်းသားဗိုလ်ချုပ်ဒေါင်၏ကျော်ကြားမှုထို့ကြောင့်တာတော့သေချာတယ်ဖြစ်ပါတယ်, Vangteh အတွက်လူတိုင်းကိုဗိုလ်ချုပ်ဒေါင် '' tuu "(ဗိုလ်ချုပ်ဒေါင်၏သားကဲ့သို့သူတို့ကိုယ်သူတို့အခိုင်အမာ, သူတို့ကသူ၏ဝိညာဉ်ရေးရာအကာအကွယ်အာဏာနှင့်တန်ခိုး၏ယုံကြည်ချက်အတွက်ပိုင်ရာမိသားစု၏ကြားမှဗိုလ်ချုပ်ကြီး Dong '' TAA ") ။ ဤသည်မှာလည်းယေဘုယျအားဖြင့် "ဗိုလ်ချုပ်ဒေါင် '' tuu, ဗိုလ်ချုပ်ဒေါင် '' TAA" ဟုအော်ရန် Vangteh တစ်ဘုံအလေ့အကျင့်ဖြစ်လာသည်။
Vangkhua sa'ng ee Khumpi (Khumhpi) နောက်ချေး nuai ah, lentu ciingzing kuam ing ထိုင်လျက်, saigual အတွက် Gamzaang tukol tawi ee ing သီခငျြးဆို
Buaivom nawhna kulhsing zaang thuap ah Dong တှငျ ka khawhtaang ciauli lai suun aa, sauzawl palsak palkhang Thuam ciang ing ee အတွက် [ G. အ dong, က c ။ 1400]
ငါသည်ခပ်သိမ်းသောအထူချုံစင်ကြယ်စေခြင်း, Khumpi (Khumhpi) အရတစ်မြို့ built ရှိသည် ဖြစ်., ဒါကြောင့်ဒါကြောင့်အစေ့နှင့်အသီး Corps ရှိခြင်းကြောင့်စားပွဲပေါ်မှာပွညျ၌များစွာသောအကြားချီးမြှောက်ခြင်းခံခဲ့ရသည်
ထို့ပြင်မင်းသားဗိုလ်ချုပ်ဒေါင်သည်မိမိလူများနှင့်ဘာသာရပ်များအခြားသစ်ကိုအခြေချနေထိုင်တည်ထောင်သူတစ်ဦးအလွန်နိုင်စွမ်းမြင့်မြတ်သောမင်းသားအဖြစ်အခြားအမြိုးအနှယျ၏သက်ကရာဇျစဉျအတွက်ကောင်းစွာမှတ်တမ်းတင်ထားသောဖြစ်ခဲ့သည်။ ဥပမာအားဖြင့်ဒေသခံဝဲပေါ် မူတည်. Ngen Dawk အဖြစ်ကိုင်တွယ်ခံရ Ngawn (Ngorn) ၏သက်ကရာဇျစဉျတှငျ, သူပစ္စုပ္ပန်ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး Bualkhua ခဲ့ကြပါပြီအဖြစ်စွပ်စွဲခံခဲ့ရသည် ဖလမ်း ။  အမှန်မှာနောက်ထပ်ပြောပါတယ်အခြားရိုးရာသီချင်းအတွက်သက်သေဖြစ်ပါတယ်:
Kawlni ee, Lenthang ee, တစ်ဦး pi ee တစ်ဦးမျှမ EE ... nahtang Teh kawmaa meilah tawh tai [အမည်မသိ, c ကို EE ta ။ 1450]
Kawlni နှင့် Lenthang ထွက်ခွာအားလုံးပိုင်ဆိုင်ရာနှင့်အတူဟောငျးနှင့်လူငယ် ...
Akkpi ta kop ka khawi, Lenthang khua ah tai tah
တစ်ဦး Mei nahtaang kawm ah vingvial အတွက် Lenthang khua ah tai tah, Ano pualah
Vangteh အစဉ်အလာအရ "Lenthang (Vangteh ၏ဒေသခံဝဲအတွက် Lensang)" နှင့် "Kawlni" Vangteh နယ်မြေတိုးချဲ့အတွက် Vahui မိသားစုများအတွက်မင်းသားဗိုလ်ချုပ်ဒေါင်၏နန်းစံစဉ်ကာလအတွင်းစတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးပထမဦးဆုံးသောအရပ်တို့ကိုမခဲ့ကြသည်။ 
ဤသည်ပင်လည်း Ngawn သက်ကရာဇျစဉျအတွက် Vangteh, ဒါမှမဟုတ် Ngen Dawk ၏ဒေသခံအသံထွက်အတွက် Ngen ဒေါင်အဖြစ်လူသိများမင်းသားဗိုလ်ချုပ်ဒေါင် (Gendong) ၏ကသူ့ညားစိုးမိုးရေး, အောက်မှာဝေးသောပြည်မှ Vangteh ၏ဘုန်းအသရေ၏ပေါက်ထွက်၏ရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့သက်သေအထောက်အထားဖြစ်ပါတယ်, သို့မဟုတ် Lushei အတွက်ပင်ဗိုလ်ချုပ် Dawka (Lusei) အစဉ်အလာ။
ဒါဟာ Vangteh ပင်၎င်း၏အထွတ်အထိပ်ရောက်ချိန်တုန်းကစဉ်အတွင်းတစ်ဝေးထူထပ်တိုင်းပြည်ဖြစ်ခြင်း၏ကြားမှ 700 အိမ်ထောင်စုအိမ်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပလူနေထူထပ်ခြင်း, တစ်ဦးနေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးနွယ်အခိုင်အမာသော Guite မင်းဆက်၏နိုင်ငံရေးဗဟိုချက်ဖြစ်လာခဲ့သည်ခဲ့ကြောင်းသူကပြောပါတယ်ခဲ့သည်။ 
" မင်းဆက် " ဒီမှာကစကားလုံး ukna သို့မဟုတ် "maanna" သို့မဟုတ် ukna gam သို့မဟုတ်ကေ-gam ဘို့အနီးဆုံးအင်္ဂလိပ်နှင့်ညီမျှသည်စာသားအရ "စိုးစံ" သို့မဟုတ် "အချုပ်အခြာအာဏာ" သို့မဟုတ်ပင် "စည်းမျဉ်း" ကိုဆိုလိုသည်။ ၏နေရောင်ခြည်နွယ်၏ပြောဆိုချက်ကိုကိုရည်မှတ် Guite မိသားစု တစ်ခုကိုအဖြစ်လူသိများသည်အဘယ်သူ၏လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်မွေးဖွားသည်မိမိအဘ Songthu ထူးဆန်းအိပ်မက်များအားဖြင့်ထောက်ခံခဲ့သည်အတိုင်း Sun ကဆက်စပ်သောသည် Sun က, (များ၏အကြီးအသားလျှင်အဖြစ်မဟာ Guite ၏ရှေးဟောင်းဒဏ္ဍာရီနှင့်ဆက်စပ်သောဖြစ်ပါတယ် Aisan မင်းသား) နှင့်သူ၏မိခင် Nemnep ။ ထို့ကြောင့်နာမတော်ကိုအမှီ ပြု. Guite "နီ gui (နေမင်း၏ရောင်ခြည်)" ဖြစ်အဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်ကြောင်းမိမိဘွားမှာသူ့ကိုအားပေးပြီးမှခဲ့သည်။ ဒီအစဉ်အလာ၏စောင့်ရှောက် unbrokenly ခုနှစ်, အခြားနာမည်ကျော် Guite မင်းသား, Go ကို Khua ထန် (Khaw ထန်သို့မဟုတ်ပင် Goukhothang Go) ၏မင်းသား Mualpi, လညျးမိမိမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ကိုဗီဒီယိုတင်ဆက်မှုအတွက် Sun က၏ဆင်းသက်လာအဖြစ်ကိုတဖန်စွပ်စွဲခံခဲ့ရသည်။ 
ဤတွင်အသစ်တစ်ခုမင်းသား installed ခဲ့သည်အခါတိုင်းအစဉ်အလာကိုသုံးခဲ့မင်းသား Mang တောင်မင်းသားဗိုလ်ချုပ် Dong ၏သားများကဖွဲ့စည်းရှိပြီးသားရာဇဘိသိတ်သီချင်းဖြစ်ပါတယ်။
ka Pu sial sut နေရောင် nuam mah ee မနာသီချင်းဆိုကြလော့ ka pa taang ရင်ခွင် laam nuam mah ee မနာသီချင်းဆိုကြလော့
ka pa khawlmual hi ကြက် ah ee; Kei Zong khawl nuam lai nu aw ee, ee မနာသီချင်းဆို [အမ် တောင်, ဂ။ 1450]
ကျင်းပခဲ့သော, ငါ့ကိုသူတို့တန်ခိုးအာနုဘော်, ဘိုးဘိုးနှင့်အဖေတူအထိမ်းအမှတ်ပွဲများကျင်းပဆင်နွှဲနိုင်စေ,
ငါ့ကိုကသူ၏တန်ခိုးအာနုဘော်အဘ၏တူကျိန်းဝပ်ရာအရပ်ကိုမှာကြွင်းသောအရာကိုယူနိုင်ကြစေ, အို! mom,, ငါ့ကိုဖြစ်ပါစေ
ထိုကဲ့သို့သော Mang တောင်, Mang Kiim, Pau Hau အဖြစ်အစွမ်းထက်မှူးမတ်, လက်အောက်တွင် Vangteh လည်းတစ်ချိန်ကဂုဏ်အသရေသာစွပ်စွဲသော (ဒေသခံစကားထဲမှာ "ဥစာ sagih leh tuangdung dawh sagih") '' ခုနဈပါးမှူးမတ်တို့သည်ခုနစ်တရားရုံးများ 'ထိုင်ကြပါပြီဟုလျှောက်ခဲ့သည် Vangteh ဖို့အတိတ်ကာလ ( cf. "Khua-suum sim" ၏ဟုပြောသည်သန့်ရှင်းရိုးထုံးတမ်းစဉ်) တွင်တောင်မှဝေးဝေးသောပြည်မှ၎င်း၏နိုင်ငံရေးဩဇာသတ်မှတ်ဒေသတွင်းအခြားလူသိများမြို့ကြီးများနှင့်မြို့ရွာတို့တွင်။ ဒီနှင့်အတူစိုးရိမ်ပူပန်မှုအတွက်ကိုလည်းကောင်းစွာခုနဈပါးဟာဥ (မှူးမတ်များ၏အမည်များစာရင်းအားဖြင့် "ဟာဥ sagih leh tuangdung sagih" ၏သမိုင်းမှတ်တမ်းတင် Kilte ဟုခေါ်တွင်သည်အခြားမိသားစုထံမှမိမိလက်ရေး၌ရေးထားလျက်ရှိ၏သည်သူ၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးစံချိန်, နှောင်းပိုင်း Jamaidar ND ထန်အတွက် ) အဲဒီခုနစ်ခုမှူးမတ်များ၏အကြီးအကဲအဖြစ် Pau Hau ဟုမှတ်ချက်နှင့်အတူ။  သူတို့က:
Innpi / Muallai Kaih Mang / Pau Hau
မန်တုံ Innpi Tuang သားတော်ကို
Tonglai Innpi Zaang Pau
Tuikong Innpi pau Vung
Tualphai Innpi ထွန်းကမ်း
Singnuai Innpi Vungh Do
Khuataw Innpi မန်အယ်လ်
အဆိုပါတားမြစ်မှုခံရ (များ၏ကျူးကျော်မဟာမိတ်အင်အားစုမတိုင်မီ၎င်း၏မြစ်လက်တက်နယ်မြေများအများစုလက်နက်ချခဲ့ရသည်အဖြစ်ကြောင့်အာဏာအာဏာရမိသားစုအတွင်းအကြာတွင်ပြည်တွင်းရေးရုန်းကန်ဖို့, သို့သော်, Vangteh ၏နိုင်ငံရေးဩဇာ 19 ရာစုအစောပိုင်းမှသည်ကျဆင်းစတင် Pawi ထဲမှာစတင်) အစောပိုင်းနှစ်လယ်ပိုင်းတွင်ကိုးရာစု။ နည်းဥပဒေအရ, ဒီမဟာမိတ်အင်အားစု, ထို Zahau စစ်တပ်မပါဝင် စီးယင်း အဆိုပါရသော (Liimkhai) စစ်တပ်နှင့်ဖြစ်နိုင် Tlaisun စစ်တပ်, Sukte မိသားစုအတွက် Guite မိသားစုများ၏အချုပ်အခြာအာဏာကိုအစားထိုးမယ့်လျှို့ဝှက်ချက်ကြိုးပမ်းမှုမှာသူတို့ကိုလမ်းပြအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင် ဒေသ။ ဟုတ်ပါတယ်, သုံးမိုးသည်းထန်စွာထိပ်တိုက်ပြီးနောက်  ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့မကောင်းကြောင်း-ကိုပြင်ဆင် Vangteh Sialsawm ပွဲတော် [များသောအားဖြင့်ပစ္စုပ္ပန်ပြက္ခဒိန်တွင်ဧပြီလအတွင်းမှာရာအရပျကိုယူသောအကြီးမားဆုံးပွဲတော်များများထဲမှ] ကမဟာမိတ်လုပ်ဖို့အားလုံးနီးပါးက၎င်း၏မြစ်လက်တက်နယ်မြေများ၏ညှိနှိုင်းရန်နှင့်လက်နက်ချဖို့သဘောတူ အင်အားသုံး။ ထိုကာလကတည်းကကြောင့် Vangteh ၏ Guite မိသားစု၏ယခင်မြစ်လက်တက်မြေများ၏ Sukte မိသားစုတစ်စု၏သွယ်ဝိုက်လက်ကနေတဆင့်မှန်မှန်၏မဟာမိတ်အင်အားစုမှလှည့်ခဲ့သလိုပဲခဲ့သည် Mualbeam ။ 
သို့သော် Vangteh အစဉ်မပြတ်ဤကွီးစှာအရှုံးဆန့်ကျင်က၎င်း၏အတွင်းနယ်နိမိတ်အတွင်းက၎င်း၏ suzerainty ထိန်းသိမ်းထားသည်။ ဒါဟာနှစ်ဆယ်ရာစု၏အရုဏ်မှာပွညျ၌ဗြိတိသျှတပ်များ၏တိုးသည်အထိဖြစ်ခဲ့သည်။ ပင်ဗြိတိသျှအုပ်ချုပ်ရေးကာလအတွင်းသော်လည်း, ထို Guite မိသားစုများ၏ဒေသခံတရားစီရင်ရေးအခွင့်အာဏာ, Vangteh ၏ successional အာဏာရမိသားစု, တလေးတစားဆက်ဆံခဲ့သည်။ သစ်ကိုပါလီမန်အစိုးရစနစ်ကနှင့်အတူအမျိုးသားရေးလွတ်လပ်ရေးမြန်မာနိုင်ငံတွင် (မိတ်ဆက်သောအခါထိုကွောငျ့, မြန်မာနိုင်ငံ 1950 ခုနှစ်တိုင်းပြည်-ကျယ်ပြန့်), ဦးထွန်းဦးတေဇသီချင်းဆို Vangteh ၏ Guite မိသားစု၏နောက်ဆုံးရိုက်အရာကိုဆက်ခံမင်းသား, စနစ်တကျတည်ဆဲဥပဒေအရလျော်ကြေးငွေပေးခဲ့သည်။ ဒါကနောက်ဆုံးမင်းသားထွန်းဦးတေဇအားသီချင်းဆို၏ဘိုးဘွားလိုင်းဖြစ်ပါသည် - Kul ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဗိုလ်ချုပ်ဒေါင် Mang တောင်, Mang တောင် Mang Kiim, Mang Kiim သားသုံးယောက် (Go ကို Phung, က Man Tong, Tong လိုင်) ဘွားဘွား, Go ကို Phung ဇမန်, ဦးတေဇမန်က Man Pau, က Man Pau ဘွားဘွားဘွားဘွားဗိုလ်ချုပ်ဒေါင်, ဘွား Mang Pau, Mang Pau သားသုံးယောက် (Kaih Mang, Pau Hau, Do Muang), Do Muang ဘွား Mang Phung ဘွား, Mang Phung Thual Kai ဘွား, Thual Kai Hau ထွန်းဘွား, Hau ထွန်း Kai Thawng, Kai Thawng ထွန်းဦးတေဇအားသီချင်းဆိုဘွားဘွား။ 
Vangteh လည်းကာလအတွင်းအကောင်းတစ်ဦးစံချိန်ကိုဖန်ဆင်း ဒုတိယကမ္ဘာစစ် ။ အဖြစ်ခေတ္တမျှတစ်ဦးစာရေးဆရာအားဖြင့် commented Vangteh အောင်မြင်စွာအားလုံးပတျဝနျးကငျြမြို့ရွာအရှင်မှလက်နက်ချပင်ပြီးနောက်ဂျပန်သိမ်းပိုက်ဖို့ငြင်းဆန်, စစ်ပွဲအချိန်အရပ်ဘက်ကိစ္စရုံးကအဲဒီမှာဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည် ဗြိတိန် ထိုအခြိနျကာလအတှငျးအစိုးရ။  လူတိုင်းနေဆဲပစ္စုပ္ပန်၏ကြီးမားသောအရွယ်အစားရွာအဖြစ်ဤဟောင်း Vangteh ၏ရှေးဟောင်းအရသာအနံ့နိုင်ပါတယ် တီးတိန် ၏မြို့နယ် ချင်းပြည်နယ် ရဲ့အနောက်မြောက်ပိုင်းအစိတ်အပိုင်းအတွက် မြန်မာ ။
↑ "Vangte (Approved)" ဗန်းတဲ့ at GEOnet Names Server, United States National Geospatial-Intelligence Agency
↑ "Tiddim Township, Chin State"[လင့်ခ်သေ] map, Myanmar Information Management Unit (MIMU),6August 2009, last accessed 29 November 2010
↑ List of The Satellite Views Error in webarchive template: Check |url= value. Empty.
↑ List of The Falling Rain Genomics, Inc.
↑ List of The Travel Post Error in webarchive template: Check |url= value. Empty.
↑ Cf., "khua" and "pi" in The Paite-English: Zomi Online Encyclopedia And Dictionary.
↑ See "Chin state" at The Asterism Travels & Tours – Myanmar
↑ See, Siamsinpawlpi Error in webarchive template: Check |url= value. Empty.
↑ For more on Guite's dynastic tradition, cf., Chinzalian Guite, Politico-Economic Development of the Tribals of Manipur: A Study of the Zomis (New Delhi, India: Anmol Publications Pvt. Ltd., 1999), 35–62.
↑ See, list of villages and towns established by Guite family in Piangzathang Guite, A Story of the Guite Chiefs: History and Chronology of the Guite Chieftains of north-eastern India (Lamka, Churachandpure, India: Luanzaching, 1982) [the author, Piangzathang isaformer President of Manipur Chiefs' Union]; and also see Vumson, Zo History: With an Introduction to Zo Culture, Economy, Religion (Aizawl, Mizoram, India, 1986).
↑ See the two articles under the subheadings of the "Guite" and "Sukte" in Sing Khaw Khai, Zo People and Their Culture: A Historical, Cultural Study and Critical Analysis of Zo and Its Ethnic Tribes (Churachandpur, Manipur, India: Khampu Hatzaw, 1995), 21–22, 24–26.
↑ James C. Scott, The Art of Not Being Governed: An Anarchist History of Upland Southeast Asia (Yale Agrarian Studies; New Haven & London: Yale University Press, 2009), 14–16.
↑ Cf., N. L. Zam, U, compiler, Tedim Myone Vangteh Kyeyua Yoya Nat Sayamya Ih Puzaw Patah Chin Saingya Gahtamya (Sacred Incantations for Religious Rites Performed by Priests of Traditional Religion of Vangteh, Tedim Township). Pinlone, Kalay Myo, Myanmar: U N. L. Zam, Guite Myonwe Su-win (2005), i+8+1 [this small handbook, though very limited in content, can still give some basic necessary information about the past story of the Vangteh in particular and also of the present northern Chin state ataglance in general].
↑ Surajit Sinha, Tribal Polities and State Systems in Pre-Colonial Eastern and North Eastern India (Culcutta, India: Centre for Studies in Social Sciences, K .P. Bagchi & Co., 1987), 312 [Sinha also refers to Ciimnuai (Chiimnuai/Chiimnwe/Chinwe) as the first Guite/Vuite village].
↑ Cf., article under "Kaptel Khua Satna," in Laibu Bawl Komitee, Sukte Beh Leh Tedim Gam Tangthu. Tedim, Chin State (1993).
↑ NB: there is another Guite prince with the same name, Gui Mang, who founded present Tedim
↑ See also, in S. K. Khai, 21.
↑ Laibu Bawl Committee, Sialsawm Pawi leh Khumhnuai Vangteh Khua Tangthu. Pinlone, Kalay Myo, Myanmar (1994), 1–3 [this book isalocal publication in commemoration of the annual Sialsawm festival held in 1993].
↑ Cf., Zam, com., Tedim Myone Vangteh Kyeyua, 4.
↑ Cf. Khai Nang, Vangteh [this oral tradition was first put into handwriting by Mr Khai Nang in 1925, when his younger brother, Kaang Z. Cin needs proof of his ancestral line forapromotion to the post of Viceroy's Commissioned Officer, also known as Subedar, in British Army (Indo-Burma frontier)].
↑ Cf., Mr. Gin Za Cin,avillager of Kaptel,aformer district judicial officer [Mr. Cin said that this nursery rhyme was still in use in Kaptel when he was young].
↑ Cf., Mr. Langh Khup,agrandson of Prince Tun Za Sing, the last hereditary Prince of Vangteh, as of recorded by Mr. Ngul L. Zam in his handwriting and forwarded to Khumpita upon his request, dated 18 April 2008.
↑ Mr. Vungh D. Piang, present head of Neihgup family, 1997 [Mr. Piang also confirmed this event as present head of Neihgup family in Vangteh].
↑ Please, refer to clarification of names and clans in Zam, Tedim Myone Vangteh Kyeyua, 8.
↑ Cf., Zam, Tedim Myone Vangteh Kyeyua, 2.
↑ As cited in Khai, Zo People and Their Culture, 16–17.
↑ Cf., Zam, Khumnuai Vangteh Khua..., 3–4.
↑ Gin Khua Thang, com., Guite Beh Khang Tangthu. Pinlone, Kale Myo, Myanmar (1985) [this local publication was later reverted because of its inclusion of one illegitimate name called Gui Luah in the book in 1995. In spite of this single weakness, this book still gives very accurate information on oral tradition of the Guite family at wide].
↑ Forapreview, please, view at Raja Goukhothang Documentary[လင့်ခ်သေ] as the film is on finalizing stage, and also refer to comments of Siam Tonsing at Raja Goukhothang: the Saviour
↑ N. D. Thang, Jamaidar, personal files, Vangteh (1950).
↑ Directly taken from the words of the late Mr. A. Ngen Z. Dal,avillager of Vangteh andaformer Township Educational Officer, Chin State.
↑ Cf. Laibu Bawl Komitee, Sukte Beh (1994).
↑ Prince Kai Thawng was recorded as "Kaithorn" and Vangteh as "Wunkate" following Burmese' mispronunciation in E. H. East, Rev., Dr., Burma Manuscript (1902-1910) [this isacompilation of Rev. Dr. East's daily diary taken during his missionary service in present Chin Hills. He was an American Baptist medical missionary].
↑ Cf., The Japanese War[လင့်ခ်သေ]
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဗန်းတဲ့&oldid=503654" မှ ရယူရန်
ပြင်ပလင့် သေနေသော ဆောင်းပါးများ since July 2018
ပြင်ပလင့် သေနေသော ဆောင်းပါးများ since December 2010
ဤစာမျက်နှာကို ၁၇ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၀၊ ၁၅:၃၆ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။